စာအကြွေး – Unicode Myanmar Font | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Computers & Technology » စာအကြွေး – Unicode Myanmar Font	7
စာအကြွေး – Unicode Myanmar Font
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 13, 2015 in Computers & Technology |7comments
ဒီအကြောင်းကို ပို့စ်တင်ဖို့လုပ်နေခဲ့တာ အတော်ကြာပြီ။
Technical အကြောင်းရေးရမယ် ဆိုတော့ လက် က မသွက်တာ မို့ စကားအကြွေး ရှိ မှန်းသိသိကြီး နဲ့ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့။
ဟိုးအရင်က အလုပ်ထဲ မှာ ကိုယ့်ဂွင် မို့ ကွန်ပျူတာ တွေထဲ ကြိုက်တဲ့ ပရိုဂရမ်၊ Font install လုပ်နိုင်တယ်။
အခုတော့ ကွန်ပျူတာ တွေ အတွက် Admin Right မရှိ တော့ တဲ့ အခြေမို့ ဘာမှ ကြိုက်သလို ချယ်လှယ်လို့ မရ တာမို့ ရွာထဲ ဝင်ရင် လေးထောင့် တွေချည်း မြင်နေရတယ်။ ရွာမှာ Default က ဇော်ဂျီဖြစ်နေလို့ ဘဲ။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ တစ်ခြား Gadget တွေထဲ မှာလဲ Myanmar Font မရှိတာမို့ အိမ် နဲ့ အဝေးရောက်ရင် ရွာ နဲ့ဝေးသွားတဲ့ သဘောဖြစ်နေရော။
ဒီတော့ ကိုယ် လုပ်ချင်တာကို လုပ်နိုင်အောင် တစ်ခြားဘက်က နည်းလမ်း လှည့်ရှာဖို့ ကြိုးစားရတော့မှာ။
. နိုင်ငံတကာစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် ယူနီကုတ် Font တွေ သာဆိုရင် စက်တွေထဲ Font install လုပ်စရာ မလိုဘဲ ပုံမှန်စာလုံး မြင်ရမှာပါ။
သူကြီးမင်း လဲ စမ်းလိုကစမ်း၊ မစမ်းလိုလဲ တစ်ခြား စမ်းလိုသူများ သူတို့ Website Page တွေအတွက် စမ်းချင်စမ်းနိုင်အောင် ဒီ ပို့စ် ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
နမူနာပြ ကို Aungsan.com Website နဲ့ ပြပါမယ်။
အဲဒီ Site ရဲ့ Admin ဆီ က ခွင့်တောင်း၊ သူ့ကို အင်တာဗျူးပြီး သူ လုပ်ထား တဲ့ နည်းလမ်း တွေ ကို ရေးထားခြင်းပါ။
Aungsan.com မှာ Page တွေကို အင်္ဂလိပ် လို ရော မြန်မာလိုရော နှစ်မျိုးလုံး ကြည့်လို့ ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
. မြန်မာလို ကြည့်ချင်ရင် Menu Bar ရဲ့ ညာဖက် ထိပ်မှာ ” မြန်မာစာ” ဆိုပြီ တွေ့ပါမယ်။
အဲဒီမှာ ကလစ် လုပ်ရင် မြန်မာလို Page ကို ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ကို အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ လေ့လာနိုင်သလို မြန်မာစာ နဲ့လဲ မြန်မာနိုင်ငံ မှာရှိ တဲ့ ကလေးငယ်များ ဗဟုသုတ အဖြစ် ဝင်ဖတ်နိုင် အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။
. မြန်မာစာ Font မရှိ တဲ့ စက်များ (သို့) မိုဘိုင်းဖုန်းများ ကနေလဲ ဝင်ပြီး ဖတ်နိုင် အောင် Unicode ပုံစံ ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲ ပေးထား တာမို့ လေးထောင့်တုန်းများ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
အဲဒီလို လုပ်ဖို့ ကို CSS Version3က ကို “Web Fonts” သုံးပြီး ရေးထားပါ။
“Web fonts” က User များ ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ ဘာ Special Font ကို မှ install လုပ်စရာမလိုအောင် အခြေအနေ ရဖို့ Web ဒီဇိုင်နာ တွေ ကို အကူအညီပေးပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကိုယ်ပိုင် Unicode Font ရှိသူများ လဲ သူတို့ ဆိုင်ရာ Font သုံးနိုင် အောင် Rule သတ်မှတ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီဟာ အတွက် @font-face rule ကို သုံးရမှာပါ။
ဥပမာ အနေ နဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
src: local(‘myanmar3’), local(‘tharlon’), local(‘padauk’), url(‘../fonts/mm3mos.ttf’);
font-family: ‘myanmarfont’, ‘Helvetica Neue’, ‘Helvetica’, ‘Arial’, ‘sans-serif’;
အဲဒီ main.css ကို Index.htm (သို့) Photo.htm စတဲ့ First Level Page တွေမှာ ချိတ်ထား ပေးရုံပါဘဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဆာဗာ ရဲ့ Font Directoryထဲ မှာတော့ “mm3mos.ttf” ကို Download လုပ်လုပ်ပြီး ထည့်ထား ရပါမယ်။
သဘောက User စက်ထဲ မှာ တစ်ခြား Myanmar Unicode Font မတွေ့ရင် ဆာဗာထဲ က Font ကို ဆွဲပြီး သုံးခိုင်း တဲ့ သဘောပါ။
Download myanmar3 multi os font
ဒါဆိုရင် လေးထောင့်တုံး တွေနဲ့ ကိုယ့် Site ကို နှစ်ပါးသွားခိုင်းရမဲ့ ဘဝ က ကျွတ်ပါပြီ။
. နောက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ Tool တစ်ခု က bootstrap ပါ။
ကွန်ပျုတာ မှာ ကြည့်တာ နဲ့ မိုဘိုင်း မှာ ကြည့်တာ Screen size မတူနိုင်တဲ့အတွက် Screen size အမျိုးမျိုး ပေါ် မှာ အကျဉ်းအကျယ် လိုသလို အလိုအလျောက် လိုက်ညှိ ပေးနိုင် တဲ့ RWD – Response Web Design ပါ။
အသေးစိတ်သိလို Download လုပ်လိုပါက
Responsive Design – Get Bootstrap
အဲဒီ Tool ကို လဲ Aungsan.com မှာ သုံးထားတာမို့ မိုဘိုင်းဖုန်း နဲ့ ဝင်ဖတ် လဲ အဆင်ပြေပြေ ဖတ်လို့ ရနိုင်ကြောင်းလဲ ကြော်ငြာ ဝင်လိုက်ပါတယ်။
Aungsan.com ရဲ့ “၁၉ ဇူလိုင် အထူးနေ့ ” အတွက် မြန်မာလို Version လေး ကိုလဲ မိုဘိုင်း ပေါ်မှာ ဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဖြစ်စေ အားပေးကြပါဦး။
. ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။
http://aungsan.com/mm/index.htm ( မြန်မာ)
@QUIL@ says: သာဓု သာဓု သာဓု
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ဒီ ယူနီကုတ် ကို သုံးချင်တယ်
ခက်တာက ကျနော်နဲ့ ပတ်သက် သမျှ လူတွေ ကျနော် ကြည့်သမျှ ဆိုက် တွေက ဇော်ဂျီ ပဲ သုံးကြတော့ ဒွတ်ခ တွေ ရောက်ကုန်ရော။
ဇော်ဂျီ ကို ယူနီကုတ် ပြောင်းပေးမယ့် tool လိုမျိုးလေး ရှိရင် ပေးကြဘာာာာ
မြစပဲရိုး says: http://mrdba.info/zawgyi-converter/
တညားတို့ ဒုက္ခ ရောက်ပြီးမှ ပြောရဒလား အရီးရဲ့။
တ နေတုန်းက ပေါ်မလာတဲ့ စုန်းးးးး၊
ဦးကြောင်ကြီး says: ဇော်ဂျီဖွန့်က နာမည်ကိုက စီးနေတာ.. ဘယ်သူမှ ရှင်မြ…
Mike says: .အာ့ တွေသိပ်နားမလည်ဝူးဂျာ
Ma Ma says: အခု တချို့ဆိုဒ်တွေမှာ ယူနီကုတ်သုံးနေကြလို့ လေးထောင့်ကွက်ပေါ်လိုပေါ်၊ စာလုံးတွေတလွဲဖြစ်လိုဖြစ်။
အဲဒီကြားထဲကမှ တလွဲစာလုံးတွေကို အဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင် ဖတ်တတ်တဲ့အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.